ISP-Myanmar Special Series (No-1) (COVID 19 & Myanmar) - ISP-Myanmar Special Series
By ISP Admin in Publications 12 Comments
❐ Special Series No-1 တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ
■ မူဝါဒဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်အဖြေရှာမှု
⁃ ကိုဗစ် – ၁၉ ကူးစက်ကပ်ရောဂါနှင့် ဖြစ်တန်ခြေသုံးရပ်
⁃ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများမှသည် ရလဒ်ကောင်း ထွက်ရေးဆီသို့
⁃ မိုးမပြိုဘူး ပြိုခဲ့သော်
⁃ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်- ၁၉ အကျပ်အတည်း
ကပ်ဘေးနှင့် စီးချင်းထိုးသလို ရှုမြင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက
နိုင်ငံတော် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမလား
⁃ ကိုဗစ် – ၁၉ ကူးစက်ကပ်ဘေးနှင့် ပြောင်းလဲလာနေသော
⁃ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါအတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၏
မူဝါဒတုံ့ပြန်ပုံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင်ခန်းစာများ
⁃ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုယ္တရား၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်
⁃ အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြည်နယ်ဒေသန္တရမှုပြုခြင်း
⁃ ကိုဗစ် – ၁၉ နှင့် မြန်မာလုပ်သားဈေးကွက်
⁃ အကျဉ်းထောင်တွင်း လူဦးရေလျှော့ချရန် အရေးကြီးသည်
⁃ ကပ်လွန် မြန်မာ့ခရီးသွားကဏ္ဍ စိန်ခေါ်မှုများ
■ ကျန်းမာရေးနဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်အဖြေရှာမှု
(Health and Science Response)
⁃ ရှိတာနဲ့ အထိရောက်ဆုံး တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
⁃ တောင်ထွတ် – Peak (ဝါ) “စစ်” နိုင်မှ ထိရောက်မည်
⁃ ကပ်ဆိုးတခုရဲ့ ကောက်ကြောင်း
■ ရပ်ရွာလူမှုအသိုက်အမြုံဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်အဖြေရှာမှု
⁃ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်သူ
⁃ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၊
⁃ ကွာရန်တင်း၊ လော့ဒေါင်းနှင့် အကျပ်အတည်း ဝေါဟာရများ
⁃ ကိုဗစ်- ၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေ
⁃ ကိုဗစ် – ၁၉နှင့် အသက်ရှူကျပ်လျက်ရှိသည့်
■ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်အဖြေရှာမှု
⁃ ဆရာတော် အရှင်သောဘိတ (IBEC) ဆရာတော်အား
⁃ ကချင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်အား မေးမြန်းခြင်း
⁃ ကိုမြအေးအား မေးမြန်းခြင်း
⁃ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ကျမ ပါခဲ့ရင်
⁃ ကိုဗစ် – ၁၉ ကပ်ရောဂါခေတ်တွင် သီးသန့်နေထိုင်ခြင်း
■ ကိန်းဂဏန်းများကို လေ့လာ၍ တုံ့ပြန်အဖြေရှာမှု
(Let the Numbers Respond)
⁃ ကွာရန်တင်းပြုလုပ်ထားသော လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ဒီကာလမှာဒီလိုpdfဖိုင်လေးတွေလုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ လေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်ကောင်းပါတယ် စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ရင်ပိုကောင်းမှာပါဝယ်ဖတ်ပါမယ် တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း သုံးလတခါစာအုပ်ထုတ်စေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယောမင်းကြီးဇရပ်စကားဝိုငကအကြောင်းအရာတွေကိုစာအုပ်ထုတ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်
Dr.Kyin Lam Mang says:
This isacomprehensive analysis on Covid-19.
I am confident it can definitely support to policy makers how to prepare for the post-covid revival of the nation while help suggest for preventive measure that unexpected potential epidemic or pandemic.
U Khin Soe says:
Knowledge , awareness and friendship
အလွယ်တကူ ‌ေ့လာဖတ်ရှုနိုင်‌ေအာင်စီစဥ်‌ေပးထာတာ‌ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ Stay Home ကာလကို မြငီးငွေ့ဲ အကျိုးရှိစွာ ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်ရ‌ေစလို့ ‌ောက်ထပ်လည်း စာကောင်းပေမွန်တွေကိုမျှော် လင့်‌ေနပါ့မယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ စေတနာကို ဂုဏ်ပြုလေးစားအပ်ပါတယ်။
Victor Naing says:
ISP Myanmar ၏‌‌မြော်မြင်ချက် နှင့် ဦးတည်ချက် ကို အထူးနှစ်သက်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်ရှုလေ့လာ
Lahu Yar says:
Thank you Millions all Facilitator
ဒီလိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်၊ ဖတ်ရှုသူတိုင်းတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်၊ လုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသလို အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းယ်။
Mr Than Htun says:
Thawe Thawe Mya says: